Xildhibaanada Baarlamanka DKMG ah oo ka hadlay Magacaabista R/W Gaas – SBC
Xildhibaanada Baarlamanka DKMG ah oo ka hadlay Magacaabista R/W Gaas
Qaar ka mid ah xildhibaanada Baarlamanka dowlada KMG ah ee Soomaaliya ayaa ayaa siweyn u soo dhaweeyay u soo magacaabista Jagada Wasiirka Koobaad ee dowlada KMG ah C/weli Maxamed Cali Gaas uu u soo magacaabay Madaxweynaha DKMG ah Shariif Sh Axmed .
Xildhibaanada ayaa sheegay in raiisul wasaare C/weli Gaas uu yahay ninka xiligan ku haboon jagadan madaxweyne Shariifna uu ku soo xulay latashi iyo markuu eegay dhinacyo badan oo la xiriira xaalada uu dalku iminka marayo.
Brof Maxamed Cumar Dalxa waa xildhibaan ka mid ah Baarlamanka Soomaaliya waana madaxda Kudlada dib u heshiisiinta Baarlamanka, waxaana isagoo u waramayay Barnaamijka Xulka Wararka 24ka saac ee ka baxa SBC International sheegay in uu siweyn u soo dhaweynayo magacaabista C/weli Gaas islamarkaana uu yahay nin wax ka qabankara xaalada dalka korna u qaadi kara waxyaabihii ay ka tagtay Xukuumadii iscasishay.
Dhankiisa waxa uu sheegay prof Dalxa in uu rajeynayo in xildhibaanada Baarlamanka DKMG ahi ay ansixin doonaan marka la xorkeeno Raiisul wasaare Gaas ka isaga Ahaana uu noqondoono qofka ugu horeeya ee u codeeya Ansixintiisa.
Waxa uu sidoo kale fikir ku dhiibtay xildhibaanku in Raiisul wasaare Gaas uu ku bad baadi karo xukuumada uu soo dhisidoonana ay horumar gaarikarto hadii uusan dheg u raaricinin shaqsiyaadka iyagu doonaya in qof jecleysi ay ugala qeyb qaataan soodhisida xukuumada Cusub, isagoona ugu baaqay in uu iska ilaaliyo dadkaasi danaha gaarka ah sita islamarkaana uu adeegsado aqoontiisa iyo hogaannimadiisa.
Maalin nimadii shalay ayay Aheyd markii Madaxweyne Shariif Sh Axmed uu kaga dhawaaqay Aqalka Madaxtooyada DKMG ah ee Soomaaliya Raiisul wasaare C/weli Maxamed Cali Gaas, waxaana muuqaneysa in Raiisul wasaaraha cusub uu yahay nin taageero ka heysta golaha Baarlamanka DKMG ah ee Soomaaliya .
Sikastaba ha ahaatee waxa uu ku soo aadayaa Imaanshaha raiisul wasaarahan cusub xili ay Khilaafyo Baahsan hareeyeen golayaasha Xukuumada KMG ah iyo madaxda Sare ee Dowlada Soomaaliya, waxaana c/weli Gaas Sugeysa Howl culus oo loo marayo wadooyin adag oo qarda jeex ah.